Cabañuelas, gini ka ha bu na otu ha si aru oru, ha adighi nma? | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Amụma
Taa, anyị ga-ekwu maka usoro amụma ihu igwe nke a na-ejikarị eme ihe n’ime ime obodo na nke ahụ na-abawanye uru. Ọ bụ maka cabañuelas. Maka ndị toro n’obodo ahụ, echiche a amachaghị. Ma atiefo nka osuahu a ɛhyɛ nkuran a wonyae bere a wosii gyinae sɛ wɔbɛyɛ akwampaefo aboafo adwuma no bi nkyerɛ. Ma ọ bụ na ọ bụ usoro usoro nke na-enyere aka na amụma ihu igwe nke afọ.
Cabañuelas na-aga n'ihu taa ma na-enwewanye ọganiihu. You chọrọ ịma ka esi ahazi ha na kedụ amụma banyere afọ a 2018?
1 Mmalite nke cabañuelas
2 Njirimara na amụma amụma
3 Cabañuelas n'ọnwa Ọgọst
4 Amụma Cabañuelas maka 2018
5 Ndị cabañuelas bụ eziokwu?
Mmalite nke cabañuelas
A na-eji Cabañuelas eme ihe na ndịda Spain na America. Ọ malitere na Babịlọn oge ochie. Ọdịmma Mexico na-ewebata ihe ọmụma a site n'aka ndị Maya. Kalenda abụọ ahụ nwere ọnwa 18 na ụbọchị 20. N'ime ụbọchị iri na asatọ mbụ nke ọnwa Jenụwarị, ọnwa afọ na ụbọchị abụọ fọdụrụnụ buru amụma maka ihe omume ndị ọzọ. A na-eji ụbọchị iri na itolu nke Jenụwarị ịkọwa oge anwụ solstice na nke 18 maka oge oyi.
Enweela ike ịchọpụta mmekọrịta dị n'etiti cabañuelas na ụbọchị mbụ nke Ọgọstụ. Site n’ụbọchị ndị a, anyị nwere ike ịmata oke ihu igwe nke ga - eme n’afọ niile. Ọ bụghị ebe niile a na-eme cabañuelas na-eso ọnwa Ọgọstụ dịka ọmụmaatụ. Na South America, dịka ọmụmaatụ, ha na-eji ọnwa Jenụwarị ịkọwa ihu igwe. N'aka nke ọzọ, ndị Hindu na-eji ọnwa oyi.
Njirimara na amụma amụma
Usoro e ji mee ngụkọta ngụkọta ma ọ bụ pekarịa nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Ga-enwerịrị ezigbo ndidi na ezigbo ebe nchekwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ya nke ọma.
Anyị na-amalite site na ịkọwa na cabañuelas nke ida. Ọ bụ gbasara ịtụle ụbọchị iri na abụọ mbụ n’afọ. Okwesiri igosiputa ihu igwe anyi g’enwa n’ime onwa iri na abuo n’afọ. Nke ahụ bụ, Jenụwarị 12 agaghị egosi oge Jenụwarị, Jenụwarị 1 February, na ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ha bụ na cabañuelas azụ. Ndị a na-ewere ọnọdụ site na Jenụwarị 13. A na-eji ha ebu amụma ihu igwe nke ọnwa ndị na-agbadata n'usoro. Ya bụ, Jenụwarị 13 ga-abụ oge na Disemba, Jenụwarị 15 na Ọktọba, wdg. Site n’abalị iri abụọ na ise ruo n’abalị iri atọ nke ọnwa Jenụwarị, anyị ga-ekwu maka otu ihe dị ka ihu igwe ọnwa abụọ ọ bụla. Ya bụ, Jenụwarị 25 nọchiri anya ọnwa Jenụwarị na Febụwarị, iri abụọ na isii dabara na ọnwa Machị na Eprel, wdg.
A na - ewere ya na Jenụwarị 31 ma kewaa ya na elekere elekere abụọ na - agbadata. Site n’abali iri na abuo rue abali abuo bu onwa Disemba, site na onwa iri abuo rue ano na onwa November, were gabazie.
Ozugbo ọnwa Jenụwarị gafere kpamkpam, a na-eme ihu igwe nke ọ bụla a na-eme ma na-eme nkezi. Nsonaazụ a ga-egosi ihu igwe nke ọnwa a chọrọ ka anyị chọọ. Dịka ọmụmaatụ, ịkọ ihu igwe maka ọnwa Febụwarị, ọ ga-adị mkpa iburu n'uche ihu igwe na Jenụwarị 2 + ihu igwe na Jenụwarị 23 + ihu igwe na Jenụwarị 25 + ihu igwe na Jenụwarị 31 n'etiti 8 ruo 10 n'abalị .
Cabañuelas n'ọnwa Ọgọst
Nye ọtụtụ ndị a usoro ga-iyi nnọọ mgbagwoju anya. Na mgbakwunye, ọ nweghị ihe siri ike sayensị, ebe ọ bụ na oge Jenụwarị ma ọ bụ Ọgọstị enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na afọ ndị ọzọ. Anyị na-ekwu maka ọdịnala ndị ama ama nke e mere kemgbe ndị mmadụ n'oge ochie. Mgbe amataghi ihu igwe ma ọ bụ na o siri ike ịga n'ihu na ya, the cabañuelas bụ ezigbo usoro ịkọ ihu igwe.
Ọ bụ usoro na-adọrọ mmasị ịme wee lelee, n'ime afọ niile, ogo ịga nke ọma ị nwere. Enwekwara cabañuelas n'ọnwa Ọgọst. Usoro ahụ bụ otu, mana a na-eme ya n’August ịkọrita afọ na-eso ya. Ha dabere na kalenda Zaragoza. E kere ha ụzọ abụọ, bido n’abalị mbụ ruo n’abalị iri na atọ n’ime ihe ịtụnanya nke ga-eme n’izu abụọ izizi site na Jenụwarị ruo Disemba, na Ọgọst 1 ruo 13, ihe ga-eme n’ọkara nke abụọ n’afọ.
Amụma Cabañuelas maka 2018
A na-akpọ ndị raara onwe ha nye ịgbakọ ihu igwe n'iji usoro a cabañuelista. Na August 2017, onye nkụzi Secondary na Chemistry sitere na Valverde del Camino (Huelva), Juan Manuel de los Santos, kọwara amụma ya maka 2018.
Cabañuelas buru amụma banyere otu afọ oke oke ọkọchị na 2018 nakwa na enweghị ike ịnweta mmiri ozuzo n'oge ụbọchị mbụ nke ọnwa Jenụwarị. Ọ dọrọ aka na ntị na ọ ga-abụ afọ kacha njọ n'ikwu ihu igwe. Ọ bụ ngụkọta afọ akọrọ. Agbanyeghị, n’ime ọnwa ndị anyị nọrọ na 2018, mmiri ozuzo bara ụba n’ezie n’afọ a. Ha eruola ọtụtụ na Spain jisiri ike weghachite site na 37% nke ọdọ mmiri ruo 72%. Nke ahụ bụ ịsị, nkezi maka ọdọ mmiri Spanish bụ 72%.
N'aka nke ọzọ, ọkachamara ọzọ na cabañuelas kpọrọ Alfonso Cuenca buru amụma dị iche iche. Nye ya, afọ 2018 ga-abụ nke oke mmiri ozuzo. Ya mere, kedụ onye n'ime ha ziri ezi? Ruo ókè ha a caa ka cabañuelas bụ eziokwu? Anyi aghaghi icheta na ha bu uzo ochie ma na o nweghi nkwado sayensi. Ya mere, izi ezi ya dabere n'ọtụtụ ihe.
Ndị cabañuelas bụ eziokwu?
Dabere na onye na-ebu amụma amụma, otu nsonaazụ ma ọ bụ ọzọ ga-apụta. Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na anyị ewere amụma Alfonso, ọ ga-abụ eziokwu, mana ọ bụrụ na anyị họrọ nke Santos, ee e.
Eziokwu bụ na cabañuelas na-adịwanye mkpa n'ihi na usoro ihu igwe na-adịwanye amụma. Nke a bụ n'ihi mgbanwe ihu igwe. Okpomoku nke uwa n’akpalite oke na udu mmiri, ya mere, odighi isi nkpa ikwu na otu afo ga akọrọ.
Maka afọ 2016-2017 anyị cabañuelista Alfonso Cuenca buru amụma nke ahụ mmiri ozuzo ga-adị obere ntakịrị. Naanị n'oge opupu ihe ubi na oge Ista. Oge ndị ọzọ nke afọ ga-abụ ezigbo akọrọ. N'okwu a, afọ abụọ abụwo nke kachasị ekpo ọkụ ma dị nkụ kemgbe edere mmiri ozuzo ahụ.
N'ebe a, anyị hapụrụ gị kalenda amụma maka afọ abụọ a:
Enwere m olileanya na ị masịrị ozi banyere cabañuelas ma nọrọ na-ege ntị maka ndị nke 2019!
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịma etu ndị na-amụ gbasara ihu igwe si kwuo gbasara ihu igwe, pịa ebe a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Amụma » Ndị cabañuelas
Maka mgbe isiokwu nke homeopathy?